पुष्टि गरेर आउँदा हुन्छ, मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छु भने कारबाही भोग्न तयार छु : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा - Meronews
अर्थमन्त्रीलाई १६ प्रश्न
मलाई आरोपित गर्दा मेरो पार्टीलाई ठोक्न सकिन्छ, गठबन्धनलाई समस्यामा पार्न सकिन्छ भन्नेमा नै उहाँहरु केन्द्रित हुनुहुन्छ
मेरोन्यूज २०७९ असार २ गते १६:१३
(अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत ब्यक्तिलाई संग्लन्न गराएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाईरहेको छ । अर्थमन्त्रालय अन्र्तगतको बजेटका विषयमा छलफलको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री विहिवार संसदको बैठकमाम उपस्थित थिए । तर एमालेले उनले राजीनामा दिन मात्र सुझाएन, राजीनामा नदिए यस विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन देखि त्यसदिनको सिसिटिघि फुटेजसम्म देखाउन माग गरयो । अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दरमा हेरफेर गरिएको र केही व्यापारिक घरानालाई लाभ प्रदान गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०ले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिसभाको बैठकमा संसदीय छानविन वा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेको हो । तर अर्थमन्त्रीले तयसको खण्डन गरिरहेका छन् । तर पनि एमालेले आफनो अडान छोडेका छैन । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, पछिल्ला घटनाक्रम एवं शेयर बजारलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गरिएको अन्र्तवार्ताको सम्पादित अंश )
राष्ट्रको विरुद्ध मैले कहाँ गद्दारी गरेको छु ? जनताको विपक्षमा के काम गरेको छु ? भन्नुप¥यो, प्रमाणित गर्नुप¥यो, के नराम्रो गरेँ मैले रु मैले जे गरेको छु देशको हितमा गरेको छु । जनताको पक्षमा नै काम गरेको छु । योजना बनाउँदा कुनबाट कहाँ प¥यो, त्यो सबै कुरा त मलाई थाहा हुँदैन ।
प्रदेशको सन्तुलनमा पनि हिजोको भन्दा केही बजेट बढेको छ । एकैपटक सबै गर्न सकिँदैन । चालु योजना काटेर अर्कोमा राख्न सकिँदैन । प्रदेशमा पनि सन्तुलन मिलाउन खोजिएको छ । विगतको भन्दा बढेको छ । कर्णाली र मधेस प्रदेशमा थोरै भए पनि बजेट बढेको छ । बढी जाने ठाउँमा थोरै घटेको छ । सङ्घीयता लागू गर्ने काममा मैले प्रयास गरेको छु । मैले कहाँ गरे देशको विरुद्धमा काम रु जनताका विरुद्ध के गरेँ ? कुनै विषय नपाएपछि कथा बनाएर को मान्छे आयो रे । कथा-पटकथा बनाइएको छ । हरेक मान्छेको रेकर्ड लिएर बस्ने म यहाँ ? मेरो काम हो त्यो ? कोही पनि अनधिकृत मान्छे म हुँदासम्म यहाँ आउँदैन र आएको पनि छैन । सबै आधिकारिक व्यक्ति नै आउँछन् ।
हो, हामीले अहिलेको बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समाधान गर्न सक्छौँ । समाधानको दिशामा जान्छ । अस्थिरताबाट स्थिरता भनेका छौँ, हामीले । सक्छौँ हामी । आयातबाट क्रमशः निर्याततिर जान सक्छौँ । हामीलाई प्रकृतिले दिएको स्रोत र साधन प्रयोग गर्न सक्छौँ । केही होला कि भनेर चिन्ता गर्दा त्यसलाई सम्मान नै गर्छु ।
तर चिन्तालाई समाधान गर्ने योजना चाहियो । चिन्ताबाटै योजना बनेको छ, कार्यान्वयनमा जान्छ । हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौँ । सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिएको छ । यो आह्वानले सबैलाई उत्साहित गरेको छ । सरकारले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल हुन्छ ।
(राससका लागि रमेश लम्सालले लिएको अन्तर्वार्ता )